Isoftware yoLawulo lweAkhawunti ye Forex, Umphathi weAkhawunti eyiMt4 ye-Forex, iiAkhawunti ezininzi zeFX | I-FXCC
Ikhaya / amaqonga / PC / Umphathi Akhawunti Multi
Abahwebi bezentengiselwano abanama-akhawunti amaninzi kunye nabaphathi bee-asethi badinga izixhobo ezenza ulawulo lweakhawunti ezininzi zilula kwaye zikhuselekile.
Apha apha kwi-FXCC siziqhayisa ngokusombulula iingxaki ngaphambi kokuba zivele. Yingakho sinika abahwebi abaninzi be-akhawunti kunye nabaphathi bemali iMetFx MAM (Software Multi Manager Manager software). I-MAM ineenzuzo ezibalulekileyo ngaphezu kwamanye amapulatifomu afana ne-MetaTrader Multi Terminal umzekelo.
Isicelo se-FXCC MAM sifanelekile ukuba:
AbaThengisi abaPhezulu okanye abaPhathi beMali abafuna ukuthengisa ii-akhawunti ezininzi ze-MT4 ngexesha elinye
Abahwebi abafuna ukujonga isimo seakhawunti kunye nembali kwiakhawunti ezininzi
Abahwebi benza amashishini ngamaqela egameni lamanani amaninzi
Isisombululo sethu seMicrosoft Account sisekela:
Ukusebenza ngokukhawuleza, ulawulo lomthengisi kunye nokuhlaziywa kwiseva elula ngokusebenzisa i-plugin side side plugin
Ivumela ukuthengiswa kweengcali ze-Expert (EA) zee-akhawunti ezilawulwayo ukusuka kwicala lomxhasi
Isicelo seNkqubo yeComputer yeSofthiwe yee-parameter zorhwebo
Iingxelo zorhwebo ezingenamkhawulo
I-STP kwi-akhawunti ephezulu yokusebenza komyalelo wendibanki, kunye nokunikezelwa ngokukhawuleza kuma-akhawunti angaphantsi
Amashishini - I-Standard kunye ne-Mini Lot akhawunti yokufumana isabelo esilungileyo
"Ulawulo lweqela" ukusukela kwisikrini sokulawula esiphezulu
Ukuvalwa ngokukodwa kwamatyala nge-Master Account execution
I-SL epheleleyo, i-TP kunye nokusebenza kwe-oda
I-Akhawunti nganye ye-Akhawunti ine-output to report
Iwindow yokubuka i-Market ngaphakathi kwe-MAM
Ukujongana nokulawulwa kwenkqubo yolawulo lweMAM ngaphakathi kwe-MAM kuquka neP & L
I-MAM inikeza iinketho eziguquguqukayo kwiintengiso:
Ulwabiwo lwabiwo: Umqulu unikezelwa ngesandla kwiakhawunti nganye
Ipesenteji isabelo: Ipesenteji yenani elipheleleyo lezentengiselwano kwi-akhawunti ye-master inikwe ngesandla kwi-Akhawunti nganye.
Ukulandelelana ngokulingana: I-Auto Feature eyenza ngokuzenzekelayo ipesenteji yokulinganisela kwi-akhawunti nganye ye-akhawunti kwi-akhawunti ye-master, kwaye ngokwenza njalo unikezela ivolumu ethathwa kwi-akhawunti enkulu kwi-akhawunti esebenzayo.
Iproportional by Equity: I-Auto Feature leyo ibalwa ngokuzenzekelayo ipesenti yokulingana kwi-akhawunti nganye encinci kwi-akhawunti ye-master, kwaye ngokwenza njalo unikezela ivolumu ethathwa kwi-akhawunti ye-master kuyo yonke i-akhawunti esebenzayo.
Ulwabiwo lwepesenti: Kule nkalo, iMenenja ye-Akhawunti ichaza i-% ye-equity ukuba isetyenziswe nganye yorhwebo, apho i-X% ye-equity isetyenziselwa yonke into yokungena.
IiAkhawunti ngokuFakelwa Unlimited
I-Post Trade Price
IiNkcazo ezintsha zeNtsha
Enye yezinto ezidume kakhulu kwi-MT4 yikhono lokuthengisa ngokuthe ngqo ukusuka kumatshati. Oko kuthatha isofthiwe yethu ye-MAM, ngoko ngoku ungathengisa ii-akhawunti ezininzi kunye nokusebenza kweshati.
Umphathi we-Akhawunti ye-FXCC i-edge of technologies yokusingatha ii-akhawunti ezininzi. Uluhlu lwesici luyamangalisa kwaye luya kuhlengahlengisa ulawulo lweeakhawunti ezininzi ze-forex zokurhweba.
Nceda qaphela: Isoftware ye-MAM sisicelo somntu wesithathu. Nayiphi na imiba yobuchwephesha okanye yenkxaso kufuneka ibhekiswe kwi-MetaFX.